Razana teny Anosibe :: Lehilahy roa hita faty teo an-tsisin-dalana • AoRaha
Nielanelana minitra vitsy ny fahitana razana roa teny Anosibe Andrefana, omaly tokony ho tamin’ny fito ora maraina. Nisy fatin-dehilahy iray teo amin’ny sisin-dalana, tsy lavitry ny fivarotam-panafody iray. Teo akaikin’ny fihaonan-dalana eo amin’ny tsenan’Anosibe kosa no nahitana ny razana faharoa. Fantatra ny fianakavian’ny iray amin’ireo namoy ny ainy ireo, ka efa natolotra azy ireo ny vatana mangatsiaka. Tsy nahitana ny mombamomba azy kosa teny amin’ilay razana faharoa.
Tsy voafaritra na noho ny aretina na tsy fahasalamana tampoka teny an-dalana no nitarika ny fahafatesan’ireto lehilahy roa, samy manodidina ny efapolo taona, teny Anosibe Andrefana ireto. Gaga sy taitra ny olona tamin’ny fandrenesana fa nisy faty iray hafa indray hita, taorian’ny nahitana ny iray voalohany teo akaikin’ny fivarotam-panafody.
“Nitsitra teo an-dalana ilay lehilahy. Tsy fantatra ny nahazo azy tampoka teo. Tonga nijery ny razana ny vehivavy iray milaza ho anabaviny”, hoy ny lehilahy iray teny amin’ny tsenan’Anosibe.
Tsy nahitana ratra na endrika vono ny vatan’ireo olona hita faty ireo, araka ny fizahana nataon’ny polisy teny an-toerana. Ny borigady misahana ny heloka bevava (BC) etsy Anosy no manao ny fanadihadiana amin’ireo trangana fahafatesana ireo. Ny fiara avy amin’ny Birao misahana ny fahadiovana (BMH) no naka ny razana teny an-toerana.
Lozam-pifamoivoizana Taksibe nahadona fiara efatra teny Tsimbazaza
Lozam-piarakodia :: Vehivavy maty voatsindrin’ ny kamiao nitondra vary